त्रिपक्षीय चुनावी भिडन्तमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ भित्रि आकलन - Muldhar Post
त्रिपक्षीय चुनावी भिडन्तमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ भित्रि आकलन
मूलधार सम्वादाता २०७४, १७ मंसिर आईतवार 279 पटक हेरिएको
धनुसा- प्रतिनिधिसभाको ४ र प्रदेशसभा ८ वटा सीट रहेको धनुषामा क्षेत्र नम्बर ३ मा त्रिपक्षीय चुनावी भिडन्त रोमान्चक हुने भएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बिमलेन्द्र निधि र राष्ट्रि जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो एउटै क्षत्रेबाट चुनावी मैदानमा उत्रेपछि क्षेत्र नं.३ को निर्वाचन रोचक बन्दै गएको छ । त्यस्तै, वामगठबन्धनका तर्फबाट विभागी राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामसिंह यादवको उम्मेदवारीले पनि सो क्षेत्रको चुनावी भिडन्त थप रोचक बनाएको छ ।
अाजको नयाँपत्रिकामा खबर छ-केन्द्रमा कांग्रेस र मधेशी गठबन्धनबीच तालमेल नहुदाँ दुबै नेता चुनावी प्रतिस्पर्दामा उत्रेका हुन् । महतो सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय बनाए पनि कांग्रेसका अमरेश सिंहले सो क्षेत्र नछाडेपछि उनी धनुषामा आएका हुन् । बिमलेन्द्र निधी, राजेन्द्र महतो र अमरेश सिंहकै विषयलाई लिएर लोकतान्त्रिक गठबन्ध टुटेको छ ।
धनुषा निधिको गृह जिल्ला र पटक–पटक निर्वाचन लड्दै आएको जिल्ला पनि हो । मधेश आन्दोलन सम्मानजनहरु रुपमा आफ्नै प्रयासमा अवतरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘मधेशी जनताको अधिकारदेखि विकास निर्माणको मुद्दालाई कांग्रेसले अगाडी बढाँउदै आएको छ, त्यसकाण चुनावमा कांग्रेसलाई विश्वास गर्छन् ।’
यता, मधेशी गठबन्धनका उम्मेदवार तथा राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलको केन्द्र विन्दु जनकपुरमा मधेशी वाहेक कुनै पार्टीलाई जनताले विश्वास नगर्ने दावी गर्छन् । चुनाव पनि मधेश आन्दोलनको अंश रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘मधेशवादी दल हार्नु भनेको मधेश आन्दोलनको हार हो, त्यसमा यहाँका जनता सर्तक छन्, कसैले ललिप देखाउदैमा मधेश आन्दोलनको तका यहाँको जनताले पाएको पीडालाई बिर्सन सक्दैन ।’ विगतमा कांग्रेस, एमालेलाई जिताएर गरेको गल्ति यहाँको जनता दोहा¥याउने पक्षमा नरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, वाम गठबन्धनले सो क्षेत्रमा बिना विभागी राज्यमन्त्री तथा माओवादी नेता रामसिंह यादवलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । माओवादी कोटामा सभासद भई अहिले बिना विभागीय मन्त्री बनेका यादव प्रत्यक्षमा पहिलो पटक निर्वाचन लड्दैछन् । पेशले अधिवक्ता रहेका यादवले खोलेका सञ्चालन गरेका एक गैर सरकारी संस्था मार्फत सो क्षेत्रको ग्रमाणि क्षेत्रमा समाजसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । राजनीति भन्दा गैरसरकारी संस्थामा मार्फत गरेको कामले नेता यादवको त्यो क्षेत्रमा आफ्ना पहिचान छन् । तर राजनीतिका दुई पुरना खेलाडीबीच चुनावी यात्रालाई सफल रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन उनका लागि चुनौतिपूर्ण नै हो ।
स्थानीय तहको मतमा को अघि ?
९७ हजार ५ सय २७ मतदाता संख्या रहेको धनुषामा नम्बर ३ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २० वटा वडा पर्छ । त्यस्तै, नगरगराईन नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका,मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका र विदेह नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ यस क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसलाई राजपाले भारी मतान्तरले हराएको छ । तर कांग्रेसले धनौजी गाउँपालिका र नगराईन नगरवपालिकामा जितेको छ । मुखियापट्टी मुसरनिया एमालेले जीत हात पारेको छ । उक्त स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुको मत परिणामलाई अधारम मान्ने हो भने १ हजार ४ सय मतले कांग्रेस अगाडी देखिएको छ ।
कांग्रेसले १८ हजार ४ सय ७३, मधेशी गठबन्धनले १७ हजार ७१ मत पाएको छ भने वामगठबन्धले १५ हजार भन्दा बढी मत पाएको छ । मतको अधारमा उनीहरु नै एक अर्काको प्रतिस्पर्धि देखिएका छन् । विगतमा निधिले चुनावमा लड्दै आएको अधिकांश गाउँ क्षेत्र नम्बर ३ मै परेको छ । निधि गृह मन्त्री रहेकै बेलामा सप्तरीमा राज्य पक्षबाट मधेशी जनता माथि भएको गोली प्रहार र मधेशी जनता शहिद हुनुले उनीमाथि धेरैको धारणा फरक छ ।
दुबैलाई अन्तरघातको चिन्ता
कांग्रेसलाई धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का पार्टी संगठन राम्रो भएपनि अन्तरघातको सताएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज साहलाई रापजाका उम्मेदवारले भारी मतान्तरले हराएका थिए । साहको पराजयलाई कांग्रेसले अन्तरघात भएको ठहर गरेको थियो । यतिबेला निधिले पाएको टिकटको विषयलाई लिएर पनि पार्टीभित्रै चरम असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।
हुन त त राजपाको यस क्षेत्रमा राम्रो संगठन छैन । तर स्थानीय निर्वाचनको जनकपुरको अधिकांश वडा राजपाले नै जितेकोले संगठन बलियो बन्दै गएको छ । तर प्रदेशसभाको टिकट वितरणको विषयलाई लिएर पार्टीका केन्द्रिय सदस्य मनोज कुमार चौधरी तथा पार्टीका नेता तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवकंर साह(हिरा) असन्तुष्ट छन् ।